Mari Yonetsa muPremier Soccer League
Kubvumbi 09, 2009
Pamitambo yePremier Soccer League yatambwa neChina munzvimbo dzakasiyana siyana, Lengthens yaita mangange 0-0 ne Motor Action pamutambo watambirwa kuDzivarasekwa. Hwange yakunda Highway 1-0 pamutambo watambirwa ku Sakubva Stadium kwaMutare.
Black Rhinos yakunda Eagles 0-1 pamutambo watambirwa kuRudhaka stadium kuMarondera. Highlanders neShooting Stars dzaita mangange 0-0 kuBarbourfields Stadium kuBulawayo.
Mudzimwe nyaya dzemitambo, munyori mukuru wechikwata cheMonomotapa, icho chakatora mukombe wePremier Soccer League gore rapera, Va David Makombe, vanoti zvikwata zviri mu PSL zvizhinji zviri kutarisana nedambudziko remari, zvikurusa chikwata chavo, icho chakatarisana nemitambo yekunze kwenyika yeCAF Champions League.
VaMakombe vanoti vari kufadzwa nemashoko ekuti sangano rePremier Soccer League rakanyorerana chibvumirano neZimbabwe Broadcasting Corporation chekuti mitambo yePSL itange kuratidzwa panhepfenyuro sezvo izvi zvingangobatsira sangano re PSL kuti riwane mukana wekupa rubatsiro kuzvikwata zviri mu PSL.
Marvellous Mhlanga Nyahuye weStudio7 aita hurukuro naVaMakombe pamusoro pekuparurwa kwemitambo yePremier Soccer League panhepfenhuro yeZBC.